Gbasara Anyị - Yunis International Trading Co., Ltd.
E guzobere Yunis International Trade (HK) Co., Ltd. na 2011. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ikike mbubata na mbupụ nke gọọmentị steeti ahụ na-akwado ahia azụmaahịa na akụ na ụba na njikwa izugbe nke kọstọm. Companylọ ọrụ ahụ nwere ntọala akụ na ụba siri ike, netwọkụ mmekọrịta siri ike, yana ndị ọrụ zuru ezu. Site na ntinye aka China na WTO, nnabata na mbupụ na-abawanye. Iji mezoo mkpa nke ndị na-azụ ahịa na ndị na-ebubata ya na ndị na-ebubata ya, ndị ụlọ ọrụ anyị emepụtala ụzọ na-emechi ọnụ ụzọ maka ndị ahịa gburugburu ụwa. Anyị nwere usoro mbubata mbubata na mbupụ na mba China China.Ma enweela mmekọrịta chiri anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị na-ebugharị ụgbọ elu.
Anyị nwere ike ịnye ụzọ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ elu kacha mma maka mba ndị na-ebupu ngwa ahịa gị, yana nhichapụ idozi ma zụta. Inshọransị na ọrụ ndị ọzọ, n'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ anyị nwere ụlọ nkwakọba nke ọma na Yiwu iji gboo mkpa nke ngwongwo gị na mbufe Yiwu, ị nwere ike ịlele isi mmalite nke ngwongwo, nchịkọta buru ibu, họrọ usoro nnyefe kwesịrị ekwesị, nnyefe dị mma na ngwa ngwa Ruo ngwongwo.
Ime Azụmaahịa Dị Mfe
Anyị nwere netwọọdụ ozi ngwa ahịa dị iche iche na ndị mmekọ ụwa niile. Site na nduzi nke usoro azụmaahịa azụmaahịa nke "ime ka azụmahịa dị mfe", anyị enwetala nsonaazụ ndị dị egwu site na mbọ niile nke ndị ọrụ niile. Companylọ ọrụ anyị nwere ndị nwere azụ azụ nwere azụmaahịa na-arụ ọrụ yana ike arụmọrụ siri ike. Ka ị na-enye ndị ahịa ụzọ ụzọ dị iche iche esi arụpụta ngwa agha, ha nwekwara ike mepee ahịa ndị China maka ndị ahịa si mba ofesi ịchọta isi mmalite nke ngwongwo, lelee ngwa ahịa, wee kwupụta nchegbu niile nke mbubata na mbupụ. Nye ndi oru aka, ahaziri onwe gi, ihu ubochi niile.